Kooxda Riyada Deco: Ronaldo, Messi, Scholes, Zidane, iyo xiddigaha Uu Xushay
HomeChampions LeagueKooxda Riyada Deco: Ronaldo, Messi, Scholes, Zidane, iyo xiddigaha Uu Xushay
Deco waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyada caqliga iyo xikmadda badan u adeegsada kubadda cagta, taasi waxay u horseedday in uu laba jeer ku guuleysto tartanka Champions League.
Sannadkii 2004 ayuu isaga oo u ciyaarayey FC Porto waxa uu ku guuleystay Champions League iyadoo uu xilligaas tababare u ahaa Jose Mourinh. Sannadkii 2006 ayuu mar kale u dabbaal-degay hanashada Champions League isaga oo Barcelona u horseeday in ay ku guuleysato koobkan qaaliga ah.
Kooxda Chelsea oo uu ku biiray markii uu ka tegay Barcelona, waxaanu isgeyn saftay 103 ciyaarood oo tartamada Yurub ah, halkaas oo uu ka dhaliyey 19 gool.
Marka dib loo eego xirfaddiisa iyo wakhtigii uu ciyaarayay waxa markiiba niyadda soo gelaysa qaabkii uu kubadda u samayn jiray, aragtidiisii dheerayd iyo in uu dareenkiisu la socday dhaqdhaqaaqa dhamaan ciyaartooyada garoonka ku sugan, taas oo ahayd hibo uu Allah siiyey.
Haddaba, ciyaartoygan ayyaa soo xulay 11 ciyaartoy oo ugu wanaagsanaa Champions League kuwaas oo ay wada ciyaareen intii uu kubadda ku jiray amaba ay isaga hor yimaaddeen.
Manuel Neuer: Deco waxa uu tilmaamay in aan aad loo aqoonin Neuer markii uu isagu kubadda ciyaarayay, hase yeeshee uu ku tilmaami lahaa gool-wadihii ugu wanaagsanaa ee abid ciyaara tartanka Champions League. Qaab ciyaareedkiisa xulka Germany iyo Bayern ayaa labaduba ah wax aan la malayn karin.
Carles Puyol: Hoggaamiyihii Barcelona in uu yahay ayuu aaminsan yahay Deco, waxaanu tilba ku tilmaamay in awooddiisa difaac ay ahayd mid dadka kale uu kaga horreeyo, muhiimna uu ahaa mar kasta khaasatan marka la joogo kooxda dhexdeeda iyo garoonka dhexdiisaba.
John Terry: si la mid ah sida Puyol uu hoggaamiye ugu ahaa Barcelona, ayuu John Terry u hoggaamiyaa Chelsea, waanay adag tahay in Chelsea ay hesho beddelkiisa marka uu ciyaaraha ka fadhiisto sida uu sheegay Deco.
Ricardo Carvalho: Mid ka mid ah raggii ugu qiimaha badnaa ee u suurtogeliyey in uu ku guuleysto Champions League ayuu ku tilmaamay Deco. Waxa ay ka wada ciyaareen Xulka qaranka, Porto iyo Chelsea.
Diego Simeone: Deco oo ka hadlayay sida uu u ciyaari jiray Simeone ayaa waxa uu yidhi: “Diego Simeone waxa uu ahaa tartame adag, waxa uu mar kasta kuu sheegi jiray in uu kaa horreeyo. Kaliya ma ahayn nin adag, hase yeeshee waxa uu bixin jiray baasas heer sare ah.”
Paul Scholes: Amaanta kalama bakhaylin laacibkan reer England, hase yeeshee waxa uu Deco ku tilmaamay in Scholes intii uu kubadda ku jiray uu ahaa xirfadle wanaagsan, khaasatan khadka dhexe uu ahaa mid ka mid ah raggii ugu wanaagsanaa ee ka ciyaaray tartanka Champions League.
Xavi: “Wuxuu ciyaaray kubadda heerkii ugu sarreyey ee khadka dhexe, wax kastana way u hagaageen Barcelona. Waxa laga yaabaa in ciyaartooyada kale ay warbaahintu boggooda hore ku qoreen, laakiin Xavi dhamaantood wuu ka sarreeyey.” Sidaas waxa yidhi Deco oo ka hadlayay Xavi.
Zinedine Zidane: mid ka mid ah dadkii ugu wanaagsanaa jiilkiisa, waxaanu Deco tilmaamay in uu yahayba shakhsiga ugu xirfadda wanaagsanaa laakiin uu jeclaan lahaa in ay isku koox ka wada ciyaaraan. Waxa uu ku wanaagsanaa dhinac walba.
Lionel Messi: waxa uu Deco sheegay in uu Messi u dhashay caqliga badan ee uu kubadda ku ciyaaro, sidaas daraadeedna aanay anay mid ku timid dedaalkiisa, taas oo aan la bari karin Ronaldo oo ay ku adkaan doonto in uu ku fikiro in uu u ciyaaro sida Messi, laakiin ay labadoodba yihiin shakhsiyaadka ugu wanaagsan dunida.
Cristiano Ronaldo: Waxa uu tilmaamay Deco in dadka badankoodu aanay ogeyn dedaalka badan ee uu Ronaldo sameeyey si uu u gaadho halka uu maanta taagan yahay, oo ah in uu yahay xirfadle sarreeya. Dabcan, awood dabiici ah, oo ay la socoto dedaal badan iyo shaqo adag oo uu sameeyo, taas oo sabab u noqotay in loo doorto xiddiga adduunka.
Ronaldinho: Deco oo ka hadlaya sababta uu u xushay Ronaldinho, ayaa waxa uu yidhi: “Mar walba waxaan xasuustaa wakhtigii aanu wada joognay Barcelona, oo uu dhalin jiray laba ama saddex gool, waxaanu Ronny (Ronaldinho) bilaabi jiray in uu naftiisa ka farxiyo. Waxa uu sameeyey waxyaabo kaliya in aad ku fikirto mooyaane aanay suurtogal ahayn in kubadda cagta laga sameeyo, waxa uu ahaa shakhsigii ugu wanaagsanaa ee aan waligay la ciyaaro.”
Wolves vs Leeds United 4-1 – All Goals And Highlights & Championship
Korodhso Aqoonta Aad U Leedahay Horyaalka Ingiriiska Ee Premier League
Dhaawac Kala Dhantaalay Shaxdii Benitez Ee Real Madrid
13/10/2015 Abdiwahab Ahmed